Track 1: Rise — UHAMBO LEE - OFFICIAL SITE
Uyazi ukuthi ubhekene wayemthanda futhi uku aziwayo?
Sonke ukugibela ohlangothini olungafanele
Kodwa thina eshaya esifubeni ngesikhathi guy okungalungile
Singase singasho ngomlomo it kho lomo yethu, kodwa senza ngezimpilo zethu yonke
Yilokho amanga bold, bonyana oPhezukonke akukho close by, sonke siyafa
John 5:28,29, umahluleli ilapha!
Simon • December 9, 2014 at 12:40 pm • Phendula
Ngiyakuthanda le ngoma futhi wonke umculo! UNkulunkulu akunike zona isipho akukho mfihlo kungcono ezinsukwini zokugcina futhi ubhekene ehola abantu onikela ukuphila! Yinto enhle ngoba izikhathi Gonna ukufika crazy, kodwa akukho okungavimba nathi uma sivuka.
Wena ugqozi kimi ngazo zonke kulingwa yami! #116
eliassimbeye • December 10, 2014 at 8:54 am • Phendula
lezo enamandla isosha esihlatshelelwayo yomuntu ingubani ezivela eZambia lapha iculo kunzima ukulanda kufanele sisebenze kanzima ukuze ithole imali download.so i kanzima ukusebenzela week.anyway ngemva i umhlambi albhamu angizisoli.
PastorTony • December 11, 2014 at 10:45 pm • Phendula
athande lolu guys umculo!! Ngempela wanna ambangela ukuba iBandla lami e Manassas Va. Yeka ukuthi kuyisibusiso kanjani NKULUNKULU!
Morgan • December 31, 2014 at 12:59 pm • Phendula
I am 14 futhi im namanje kokuncika ngubani futhi lokho uNkulunkulu ayikho,futhi uma ekhona ngempela noma cha. Ngazi usengangami wonke umuntu ungaqiniseki, kodwa mina ngempela ufuna ukuba othile. Le ngoma langisiza ukuba ngazi ukuthi mina akudingeki ukuba singaqiniseki manje ngoba azenzile izinto eziningi mina nami akudingeki ukuba ngabazeka.
Tshangana • January 29, 2015 at 1:14 am • Phendula
Trip lee a ugqozi omkhulu kimi. Indlela i thanda ukukuhlangabeza ngolunye usuku umuntu. Abantu ova Hir ukungitshela sibheka futhi senze ngokufana. Wena insimbi enamandla kangaka e ezandleni zikaNkulunkulu. UNkulunkulu akubusise mfowethu wena!
PhantomL82 • October 13, 2015 at 9:49 pm • Phendula
I, owahlabelela hook?